မေမေ့ ရဲ့ မွေးနေ့မှာ ပိုက် ဆံ ပန်းစည်းကြီး လက်ေ ဆာင်ေ ပးပြီး ဆု မွ န်ကော င်းတောင်းေ ပးလိုက် သော လှအဉ္ဇလီတင့် – The News Post
မေမေ့ ရဲ့ မွေးနေ့မှာ ပိုက် ဆံ ပန်းစည်းကြီး လက်ေ ဆာင်ေ ပးပြီး ဆု မွ န်ကော င်းတောင်းေ ပးလိုက် သော လှအဉ္ဇလီတင့်
July 27, 2020 By thu han soe Celebrity
မေမေ့ ရဲ့ မွေးနေ့မှာ ပိုက်ဆံ ပန်းစည်းကြီးလက်ဆောင်ေ ပးပြီး ဆုမွန်ကောင်းတောင်းေ ပးလိုက် တဲ့ လှအဉ္ဇလီတင့်
ပရိ သတ်ရဲ့အချစ်တော်မင်းသမီးချောလေး လှအဉ္ဇလီတင့်ကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ အနုပညာအလုပ်တွေ မလုပ်ဖြစ်တော့ဘဲ စီးပွားရေးပဲ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသူပါ။ ရွှေအဉ္ဇလီစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ကာ ရွှေစိတ်ပျော်သုပ်နဲ့ ဝက်အူချောင်း စတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေကို မြန်မာပြည်အနှံ့ဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိပါ တယ်။
မနေ့ကတော့ လှအဉ္ဇလီတင့်ရဲ့ မိခင်ကြီးမွေးနေ့ဖြစ်ပြီး မေမေ့မွေးနေ့အတွက် တစ်သောင်းတန်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပန်းစည်းကြီး လက်ဆောင်ပေးခဲ့သလို မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ” Happy birthday ပါ Mum… ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာဖြင့် အသက်ရာကျော်ရှည်ပြီး တရားဘာဝနာများအားထုတ်နိုင်ပါစေ…. အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာလှူတန်းနိုင်ပါစေ…. ဒီဘဝမှာပဲ တရားထူး များရပါစေကြောင်း ဆုမွန် ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ် ” ဆိုပြီး မေမေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါ တယ်။
မိဘကျေးဇူးအအထူးသိတတ်ပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်နေ့စဉ်ပြုနေတဲ့ လှအဉ္ဇလီတင့်ကတော့ တကယ်ကို အားကျအတုယူဖွယ်ရာပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ… မိသားစုတွေစုံစုံညီညီနဲ့ မေမေ့မွေးနေ့ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါ တယ်နော်။
မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေ အား တရုတ်ပြည် သို့ မ လာ ကြ ဖို့ တိုက် တွန်း လိုက် သော တရုတ်ပြည် ရောင်း စား ခံ ခဲ့ ရ သူ မြန်မာ အမျိုး သမီး တစ်ဦး
အိမ်ဖော် မလေး ကို လော ဘေ တွ ကြား မှာ မ နစ် မွန်း ပါေ စ နဲ့ လို့ ဆုံး မ လိုက် တဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်း ရာဇာ